Andro manokana StValentin: Misy ny fitiavana ve eny amin’ny lanitry proche Orient? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2009 19:44 GMT
Raha misy dikany anarivony ny sary iray, dia io no sarin'i Cece, izay miorina anelanelan'i Bahrain sy Kuwait, nalefany amin’ny bolongana mba hamehy ny fahatsapany mikasika ny fetin’ny mpifankatia (saint Valentin).
na dia tsy irery aza izy amin’ny fanazavana ny fombafomba, izay mbola vaovao tanteraka ho an’ny faritra, ny hafa kosa efa mankalaza.
Milaza I Amal, avy any Bahrain, fa na eo amin’ny tokan-tena na ny efa manana namana dia miseho amin’ny endrika manokana ny andron’ny mpifankatia (Saint Valentin)
“na dia hoe mety hatahotra raozy mena mankandoa sy ny Sōkōla (chocolat) miendrika sary fo mampatahotra aza ny tokantena, Na dia hoe mety ho kamokamo aza ireo manan-tsakaiza, ka na inona na inona aza no maninona, ny fitiavana dia mambambo ny maro foana ary manetsika ny lohaliky ny rehetra hangovitra eto ambonin’ny tany ka mampisavoana ny fontsika ho eny amin’ny hakanton’ny lanitra.”
Tsy misy afaka manala ny fihetsem-po sy ny fitadidiana izay entin’ny fetin’ny mpifankatia , hoy ny mpitoraka blaogy avy any Kuwait antsoina hoe Desert Girl.
“FETIN’NY MPIFANKATIA!!! TIAKO ny fetin’ny mpifankatia. Andro manakaiky ny fotoana naterahako, io no fety ankafiziko indrindra. Tiako ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny St Valentin. Tiavo, tiavo, tiavo izany. Zatra ny nahazo fanomezana mahafinaritra sy feno fitiavana aho amin’ny andron’ny mpifankatia. Nieritreritra aho fa efa lasa ireny andro ireny. (sento mavesatra, ontsan’ny fo) Ree-ru (mpifamofo taloha teo amin’ny tantara) no nanome ahy saribakoly “bunny”mahatsikaiky izay mitazona sary fo iray miaraka amin’ny sofina mandroso-mihemotra ary ny orony mihetsiketsika. Tiako ny Bunnies (saribakoly bitro). Mihevitra aho fa io no zavatra tena mahavariana sy mampandefa ny eritreritro lalina; kanefa dia tsotra sady mora be ny vidiny. Hitanao fa izay fotsiny ihany e – Tsara ny mandray zavatra goavana, fa ny zavatra tsotra mandefa ny fisainana lalina no mijanona ao am-ponao sy ny sainao. Tsy firavaka velively, na fiara, na fandehanana an-tany lavitra, na vola…… fa kosa sarin’ny bunny tsisy dikany izay mbola ananako ao amin’ny efitranon’ny rahavaviko ambany rihana no tadidiko foana” hoy izy.
Mbola any Kuwait ihany, fintinin’I Flamingoliya ny fihetsem-pony mikasika ity andro Valentine ity ao anaty andalana iray.
“fetin’ny mpifankatia rahampitso ary tia olona aho. Aza anontaniana aho hoe iza izany. Be dia be izy ireo” hoy izy.
Raha ampitahaina, tsy misy na inona na inona nanainga ny fanahin'i Scarlett mipetraka any Bahrain mandritra ity andron’ny mpifankatia ity.
“mahatsiaro hoe meloka aho tsy mba nahatsapa ny fisehon’ny andro tao am-piasana androany. Miezaka ry zareo ny manao izay mety amin’ny fiankanjoana miloko mena , na fotsy, na mavokely na koa karazan-doko telo miaraka, eny fa na ny eto akaikin’ny toerana ipetrahako aza manao loko volon-tany sy loko mainty.Voninkazo voakarakara aoka izany no tonga mivoy an-kira manantona ireo vehivavy sy ireo vady mendrika na ireo olon-kafa manan-danja eo aminy. Ny anankiray tamin’izany dia tranom-borona misy boloky kely anankiroa voarakotra raozy mena midorehitra. (ilay tranom-borona izany fa tsy ny vorona akory)
Ny tranom-borona sy ny fomba fiankanjon’ilay tovovavy no tena nanaitra ahy. Eny, izany sy izany ary ny fanontanian’ny olona tsy mijanona milaza hoe inona no tsy metimety aminao, hita fa vizana tokoa ianao/ohatry ny vao avy nitomany – Kanefa tsy avy nitomany izany akory aho (tafalatsaka tao anaty fihetseham-po lalina fa tsy hoe tsy fahampiana torimaso izany, eeee, mbola !). Azoko ny tiany ho tenenina “ajanony any rangaha ah”, avy eo nivavaka aho mba tsy nahavoaray ilay fantsona kelin’ny lokomenan’I Channel izay avy tao anatin’ny kitapoko misy ireo fitaovana enti-miaingo..
Soa ihany fa tsy voaraiko. Rehefa afaka teo anatrehan’ireto vehivavy aho dia nandeha nampiasa moramora ny lokomenako……..noho izany dia nipetraka sady nandoko ny molotro teo no nataoko”, hoy izy nanazava .
Etsy andaniny, mihevitra ny Black Iris avy any Jordan fa tsy hanao blaogy momba ny St Valentin mandritra ny andron’ny mpifankatia hono izy.
Hentitra ny filazany fa tsy hitoraka blaogy izy amin’io andron’ny mpifankatia io:
…..Ny lohahevitra ankapobeny indrindra:….Fitiavana sa ny tsy fahampian’izany ao anatiny….Ahoana moa, andro iray voamarika hisintonana ny vola avy ao am-paosy anie io e….Ahoana moa fa mariky ny fanandevozana ara-kolotoralin’ny Proche Orient io. Ahoana fa faneva mitaratra ny fikorosoan’ny fiainana ara-tsosialy izay mitarika indrindra ny fianjerantsika mahakasika ny fivoharan’ny fiainana ara-tsosialy izy io.
Mandritra ny andron’ny mpifankatia dia tsia, tsia, tsy hitoraka blaogy momba izany aho….Ny fitrangan-javatra mampalahelo mampiseho olona mividy saribakoly orsa Teddy eny amin’ny Safeway…..Tsy halefako blaogy izany mandritra ny andron’ny Valentine… Ny Fatwa….tonon-kalom-pitiavana avy amin’ny mailaka mivohy ny fitiavana… na koa mailaka nalefa miaraka amin’ny sarin’alika kely mahafatifaty sy ireo sarin-tsakakely anaty harona…. sy ireo taratasim-pitiavana ankapobeny izay mameno ny boatin-kafatro.
Andraso. Aoka . Ajanony.
Tsy hitoraka blaogy aho amin’ny fetin’ny mpifankatia.
Ho an’ny Angilisy iray ao Arabia Saodita, mbola fankalazana ara-barotra iray hafa ny fetin’ny mpifankatia
Manelingelina kely ahy ny fivandravandran'ny mahafetim-barotra ny andron’ny mpifankatia. Tsara raha toka-tena sy manana olona manokana hitopaza-maso ianao, fa raha ohatra ka manambady aho, ahoana aho no tsy maintsy hividy raozy sy karatra kely ho an’ny vadiko amin’io andro iray amin’io taona io? Tsy misy dikany firy ve izany raha toa ka mividy izany ho azy amin’ny fotoana izay mampanembona anao ianao? Mahatonga ho poakaty ny fisainana raha ity fitakian’ny fiaraha-monina ity.
Nefa… efa nivady izahay nandritra taona maro ary noho ny fomba eto an-toerana dia ity ny andro voalohany tsy nahafahanay nividy karatra hifandefasana St Valentin ho anay. Tsy afaka manao izany aho amin’izao fotoana izao, dia manontany tena aho hoe fa maninona. Fantatro fa tsy ara-pivavahana fa kosa fanoherana ny hery tandrefana?
Ankoatra izany, tsy mampiraika ahy akory ny tsy fisian’ny hetsika momba ny fetin’ny mpifankatia eto Arabia Saodita. Toa nanainga fanahy ahy aza izany.
Aleo adinoina ny “Arahaba tratry ny andron’ny mpifankatia”
Ho solon’izany kosa dia aleo isika haneho hoe “ Mifalifalia fa Mitia Ianao”
Ary raha toa ka tsy nanam-bitana ianao amin’io fotoana io?
“Mifalifalia fa maniry ny hitia ianao”, hoy ny sorany.
Mbola any Arabia Saodita ihany, Nanao lisitry ny manohitra sy manohana ny ho tokatena na ho olon-droa ny dykalicious mandritra ny ity andro manokana ity. (Tandremo : ny vehivavy mihoatra ny 18 taona sy 25 taona kosa raha lehilahy ihany no mahazo mamaky azy!)
Tsy mino aho fa ny fitiavana dia tsy maintsy ilaina borahana ao am-po amin’ny andro tokana, kanefa ny andron’ny mpifankatia dia manana zavatra tsara vitsivitsy ao anatiny raha ohatra ka misy olona miaraka aminao:
1. Fanonomezana avy amin’ny olon-tianao.
2. Fihetsika saiky tonga lafatra asehon’ny olon-tianao
3. Entina matetika any amin'ny toerana mahafinaritra ianao
4. Manome toky sy manantena filana ara-nofo
HItanao, tahaka ny tsingerin-taona nahaterahanao io. Eny fa na dia tsy dia hita aza ny vesa-danjany, dia fantatrao foana fa handray ny fanomezana sy ny mofomamy ianao! Afatsy hoe angaha ireo olona izay tsy manana namana mba hanomana fety kely ho azy ireo. Na koa ho an’ireo olona efa maty.
KANEFA, ahoana ny momba ny olona tokatena?
1. Miala tsiny tsy handeha hifamotoana amin'ny tokatena hafa.
2. Miala tsiny fa mbola misyatao amin'ny alina
3. Manaiky ny hahantra sy mamendrofendro tena rehefa tsy misy olona mivazavaza aminao hoe “ATAOVY IZAY METY”
4. Miala sirika amin'ny fanairantena ihany (masturbation)! ( raha mitady fialantsiny ianao dia izay no izy ry tompokolahy sy tompokovavy, avoahay ny fitaova-mangovitrareo (vibrators)),” hoy izy
Tany Libanona, malomaloka ny andro. Tsy andro fankalazana intsony ny andron’ny mpifankatia. Maty nisy namono tao anaty fipoahana baomba mavesatra tao an-drenivohitra Beirota ny filoha Libaney teo aloha Rafiq Al Hariri izay nitranga tamin’ity andro ity efa roa taona lasa izao.
Fa ivelan'izany ora manjombon'ny politika sy ny eritreritra kivy izany , no nitoraka blaogy misy horonantsarina raozy I Sasmen, teny mamy sy hira manamarika ny vanim-potaoana eto.
Midika ve ireto hevitra ireto fa hisy ny fanantenana hoe mety handresy ao Proche Orient ny fitiavana. Mambambo ny rehetra ny fitiavana, sa tsy izany ve?